Apple inotangisa yekutanga beta yeruzhinji yeIOS 11 | IPhone nhau
Apple Inoburitsa Yekutanga iOS 11 Veruzhinji Beta
Munguva pfupi iri kutevera mwedzi wekutanga weiyo iOS 11 kuburitswa, inotevera huru yekushandisa yeApple nharembozha, uye iwe unoziva: iOS 11 ndiyo yakanyanya kunaka sisitimu inoshanda iyo Apple yagadzira ... Iyo iOS 11 inounza nhau huru mukati asi haina kana shanduko huru yekushongedza. Kana izvozvo aesthetically isu tinogona kuona kumwe kumwe kuvandudza tichizvienzanisa neiyo yaive iOS 10, asi iyo yakakosha nhau ingangodaro iri nhema munhau dzainounza kune iyo iPad.
Tatova nazvo maviri iOS 11 ekuvandudza mabheji, mabheji maviri ayo nhasi apfuurwa neBeta vhezheni iyo mamwe madhizaini angave achigamuchira, haisi yemunhu wese saka ichiri iOS 11 Beta 2 asi inounza dzimwe shanduko idzo zvimwe zvishandiso zvaisave nazvo. Uye Zvinotaridza kuti kudzokororwa kwechipiri kweIOS 11 Beta 2 yaive yakanangana nekutanga Ruzhinji Beta reIOS 11. Mushure mekusvetuka isu tinokupa iwe zvese zvese zveiyi yekutanga Beta vhezheni yeIOS 11 ...
Chekutanga pane zvese iwe unofanirwa kuziva kuti kunyangwe iri yekutanga vhezheni Veruzhinji beta yeIOS 11, ichiri beta vhezheniUyezve, iyo yakafanana Beta vhezheni seIOS 11 Beta 2 yevagadziri, ndokuti, iwe unowana imwe imwe bug uye maapplication asingashande. Nekudaro, zvinofanirwa kutaurwa kuti idzi dzekutanga iOS 11 Betas dzinoshanda mushe uye iwe unogona kushanda ingangoita 100% muzuva rako zuva nezuva ne iDevices yako. A nyowani Control Center, nyowani App Store, kuvandudzwa kweApp Photos, ndidzo dzimwe dzenyaya dzaunowana mune ino yekutanga Beta yePhones dzako.
Asi pasina kupokana, sezvandambotaura kare zvinyorwa zvinonyanya kukosha zveIOS 11 zvinonyepa mushanduro yayo yePadad. Iye zvino iyo iPad yakanyanya kufanana nezvayaifanira kunge yakave nguva refu yapfuura, piritsi rine zana zana muzana multitasking mabasa. A dhoku iripo mune chero application, mikana ye dhonza chero faira kubva kune imwe app kuenda kune imwe, kana iyo ichangobva kududzwa nyowani Control Center, ndiwo mamwe matsva ayo iyo yekutanga Ruzhinji Beta yeIpad yatinounzira. Ipapo ini ndinokusiya uine iyo vhidhiyo yatinogadzira kutaurira dzese nhau dzeiyi nyowani iOS 11 yePadad.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Apple Inoburitsa Yekutanga iOS 11 Veruzhinji Beta
Ndekupi kwandinowana iko kurekodha kwescreen? Mune iyo application application (reel) ivo havasi
Pindura kuna Ezekieri
Ehe, ivo vanofanirwa kubuda, ini ndakango tarisa uye kana iko kurekodha kwapera, ichaenda kune iyo Mifananidzo app (iwe unozowana chiziviso chekuti yakachengetedzwa ipapo futi).
Tarisa zvekare, zvikasadaro kungave kuri kukanganisa, yeuka kuti beta ...
Nguva yekupedzisira, iyo yazvino Google yekushandisa yeYouTube ikozvino yave kuwanikwa kune wese munhu